Wasiirkii Arimaha Debeda ee maamulka Somaliland oo Muqdisho ku sugan iyo Kulan uu la Qaatay RW. Xasan Khayre | Entertainment and News Site
Home » News » Wasiirkii Arimaha Debeda ee maamulka Somaliland oo Muqdisho ku sugan iyo Kulan uu la Qaatay RW. Xasan Khayre
Wasiirkii Arimaha Debeda ee maamulka Somaliland oo Muqdisho ku sugan iyo Kulan uu la Qaatay RW. Xasan Khayre
daajis.com:- Wasiirkii hore ee arimaha dibada ee maamulka Somaliland Md. Maxamed Cabdillaahi Cumar ayaa maalintii labaad ku sugan magaaladan Muqdisho, waxaanu kulan la qaatay Raysalwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre.
Lama hubo ujeedada safarka Maxamed Cabdillaahi Cumar, balse ilo wareedyo ayaa sheegaya in uu ka qaybgalay Shir lagaga hadlayay amniga Soomaaliya oo ka dhacay Muqdisho. Wasiirka ayaa la filayaa in maalinta berri ah uu ka dhoofi doono magaalada Muqdisho.